Hare na ude uto - uzommeputa
Oke a bu ichu nta ichu nta, ihe egwuregwu di uto. Nri a na-atọ ụtọ bụ nkiri na ude mmiri. N'ihe eji egbu nri a, o doro anya na ọ ka mma isi nri n'ụlọ, mana ọ ga-ekwe omume na ọnọdụ ndị siri ike na inweta ngwaahịa na arịa ndị dị mkpa.
Na-agwa gị otu esi esi nri nke oke bekee.
Nri nke oke ohia ma obu oke ohia, n'uzo ufodu, di iche na anu nke oke rabbits, o siri ike karia ya, ya mere o na akwadebe obere oge, na mgbakwunye, aghaghi idozi ya n'uzo puru iche.
Anụ ahụ nke oke bekee kwesịrị ịgha ụgha ma ọ dịkarịa ala maka otu ụbọchị dị jụụ (na oyi na-atụ, anu ahụ nwere ike ịgha ụgha ma ọ bụ gbadaa ala ruo izu 3).
Na-esote, a ghaghị ịsị ya ma kpochapụ ya (ọ ga-eme nke a tupu ma ọ bụ mgbe ọ gasịrị).
Anyị na-atụkwasị oke bekee maka ụkwụ abụọ ma ọ bụ abụọ. Na ala anyị na-eji dochie akpa maka ihe ndị a na-emepụta n'ime ya na ọbara. Akpa kpochapu afo n'ime sternum ma wepu imeju, obi, akpa ume (o ka mma ka esi esi nri nke ozo). Anyị na-ewepụ trachea, esophagus na afo na ọbara siri ike na sternum.
Beechapụ nsọtụ nke ụkwụ na isi, wepụ akpụkpọ ahụ, dị ka ịkwa akwa site na ụkwụ ụkwụ, jiri nwayọọ belata nkwonkwo anụ ahụ na ahụ. Anyị na-ekpocha ozu ahụ na mma site na ọbara a na-agbakọ n'okpuru akpụkpọ ma wepụ ihe nkiri ndị ọzọ.
Ugbu a, ị ga-asacha ozu ma sachaa ya.
Obụpde mmiri (ihe dị ka 1 liter) na mgbọrọgwụ pasili, laurel, ose na-esi ísì ụtọ na cloves maka nkeji asatọ. Mee ka marinade dị jụụ ma gbakwunye nnu, obere mmanya (1-2 tablespoons) ma ọ bụ ihe ọṅụṅụ nke 1 lemon na squeezed garlic. Anyị na-egbutu ahihia ahụ ma tinye ya maka otu ụbọchị n'ime akpa na marinade nke ọma (mgbe ụfọdụ). Kwee nkịta ahụ tupu ị na-agbanye ya na ude mmiri, ma ọ dịkarịa ala maka awa iri na abụọ (ọ ga-adị mma n'ụbọchị) ga-efu.
Nri anụ na ude uto - uzommeputa
Ọ na-adaba na esi nri na saucepan ma ọ bụ ihe na-agba.
ahihia, bee n'ime iberibe (anụ na ọkpụkpụ) - 1 anụ ahụ;
yabasị - 2 pcs.
utoojoo ude eke oké - 150-200 ml;
okpukpu osisi dị iche iche;
ka ihe ndi ozo di ire ma obu ndi enweghi uche;
bọta ma ọ bụ mmanụ melted creamy ma ọ bụ vegetative ma ọ bụ abụba abụba.
A na-etinye galik a kụrụ nke ọma na ose, ose dị iche iche na grated nutmeg na-agbakwunye na ude mmiri - ka enye ya.
Kpoo bọta ma ọ bụ abụba dị na chandan ma jiri nwayọọ ghee ma ọ bụ gafere eyịm e ghere eghe. Anyị na-etinye ala iberibe eriri ahụ, jikọta ya, belata ọkụ na stew, kpuchie ya na mkpuchi, mgbe ụfọdụ na-akpali akpali, ikekwe na mgbakwunye na obere mmiri na ngwa nri maka otu awa. Gbalịa jiri nwayọọ na, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, stew maka minit 20. Ghọtaa oke bekee na ude ma na-ekpocha ya n'ime obere ọkụ ruo minit 3-5 ọzọ, gbanyụọ ọkụ ma hapụ ya maka minit 10. Hare, na-agba na ude mmiri, na-arụ ọrụ na elu na efere ọ bụla (poteto, buckwheat, peas, polenta). Ọ dịkwa mma ijere mushrooms n'ụdị ọ bụla, akwụkwọ nri ọhụrụ ma ọ bụ pickles na snoo na-achọ ịchụ nta.
Ntụziaka maka isi nri na-egbuke egbuke na oven
ahihia, bee n'ime iberibe - 1 anuoriri;
poteto nke na-ajụ size, ma kama oblong obere;
ude uto - 200-300 ml;
Ọhụrụ mushrooms - 200 g;
Anyị na-etinye ya na kọmpụta kọmpi na-adịghị ahụkebe (ọ bụrụ na ọ dị mkpa, belata ya nnukwu mpekere). Anyị jiri nwayọọ na-etinye poteto na butter butter ma na-agbagharị ihe ọtụtụ ugboro. A na-ejikarị bọta na-agbaze anụ ọhịa. Gbasaa anụ ahụ na poteto ma akpọọ nkụ na oven maka awa 1.
Iche iche anyị na-akwadebe mushrooms na ude mmiri. Ghee chopped yabasị, wee gbakwunye mushrooms a gwakọtara, ngwa nri na ịkpụ ụkwụ maka minit 15, wee wụsa ude mmiri ahụ. Nwuo na ọkụ 3-5 nkeji.
Mgbe nkuku ji adị njikere, wunye ya na nchịkọta anụ na eyịm na-esi na ude ma na-ahapụ ya n'ime ọkụ ruo minit 20 ọzọ.
Obi nke toki - uzommeputa
Kedu esi esi nri nke oyi na-ekpo ọkụ?
Salad radish na carrots
Achicha na kabeeji si batter
Salad na ọkụkọ fillet na pancakes
Shamrocks na anụ
Azu na ncha na ncha
Kedu otu esi eburu akwa nkume n'ụlọ?
Nri ude na chanterelle na ude
Broccoli kabeeji - esi esi esi nri?
Cod fillet na batter
Omuma salad «Chicken na painiapulu» - uzommeputa
Kedu vitamin ndị dị na ugu?
Plasticineography maka ụmụaka
Ghoul na akụkọ Slavic - otu esi emeso ghouls?
Achicha na apụl na-enweghị àkwá
Isiokwu okpokoro iko okpokoro
Adele lụrụ Paul Drayton na Alan Carr
Protaras - Cyprus - akara ala
Mmiri nke mmiri ọmụmụ - ihe ịrịba ama
Kylie Minogue nwere mmekọrịta ọhụrụ na British aristocrat!
Ngwọta nje HIV
Ụzọ iji merie nchekasị
Mgbanya ọkụ ọkụ "Ihichapụ icicles"
Mmanụ aṅụ maka ntutu - uru
Uwe mkpu akwa si Mouton - ụdị ejiji kacha mma ma mara mma